Andian-tsarimihetsika fantsom-panafody FAQ - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Inona ny haben'ny fametahana PVC ilaiko?
Ny zava-dehibe indrindra rehefa miasa Sodina PVC SY fittings no nominal Size. A 1 " mety tsara hifanaraka amin'ny 1 " sodina, na inona na inona fandaharana 40 na 80.
Mety ve ny mampiasa pipa PVC amin'ny rano mafana?
Ny lesoka lehibe amin'ny Sodina PVC dia ny zava-misy fa tsy mety ampiasaina amin'ny rano mafana fampiharana. Rehefa tratry ny rano mafana, PVC hilona.
Malemy ve ny fantsom-bokotra PVC?
Rehefa mieritreritra ny ankamaroan'ny olona PVC, mieritreritra ny fantsona fotsy sy fotsy matevina ampiasainy amin'ny rafitra fantson-drano ao an-tranony izy ireo. nefa PVC dia fitaovana marobe marobe, ary mety ho izany malefaka ary koa mafy orina. Ireo halavan'ny malefaka PVC fantsona afaka manome anao fahaiza-manao mihazakazaka tsipika tsy hizoran'ny fantsona hentitra.
Azo toherina ve ny solika fantsona PVC?
afaka PVC ary plastika hafa hose ampiasaina amin'ny solika ary mandatsa-dranomaso? Raha fintinina, tsia ny valiny, tsy azon'izy ireo izany. ... Noho ny toetoetran'ny PVC ary ny plastika hafa koa, tsy dia mifanentana tsara hampiasana azy ireo lasantsy solika na solitany. PVC ary ny plastika hafa dia miova endrika mora foana amin'ny tontolo iainana marobe, ary mety mitete na vaky
Mihinam-bidy ve ny termites?
Tsy mahatohitra bibikely izy, indrindra fa vitsikazo efa fantatr'i mihinana izany. Nasehon'ny fikarohana malefaka ny PVC tsy manintona vitsikazo, na izany aza raha malefaka pvc apetraka eo anelanelan'ny a vitsikazo taloha akany sy loharanom-tsakafo iray, dia mety manandrana izy ireo mihinana ny lalan'izy ireo namakivaky azy io